Umlilo ushise umtapo wolwazi waseNyuvesi yaseKapa | Scrolla Izindaba
Umlilo ushise umtapo wolwazi waseNyuvesi yaseKapa
Umlilo ovutha amalangabi oqhamuka e-Table Mountain ucekele phansi umtapo wolwazi i-Jagger waseNyuvesi yaseKapa.
Igumbi lokufundela le-Jagger Library, eligcina amashumi ezinkulungwane zezincwadi ezingandile kanye nezinto zobuciko ezingokomlando, selicekelwe phansi ngokuphelele.
Kusukela ngeSonto ebusuku, izithombe zisabalale ezinkundleni zokuxhumana – okokuqala kuvela amalangabi ebhebhetheka emafasiteleni omtapo wolwazi, bese kuvela amanxiwa ashisiwe angaphakathi kwesakhiwo.
Ubusuku bonke, izicishamlilo zisebenza ngokungakhathali ukunqanda ukusabalala komlilo. I-The Times ibike ukuthi izicishamlilo ezimbili kumanje zisesibhedlela zelashwa ngokusha.
Esitatimendeni, umqondisi omkhulu we-UCT Library, u-Ujala Satgoor uthe: “Ngibhala lo myalezo ngokukhula ukudumala futhi ngishaqekile ngomonakalo.”
I-Jagger Library iyikhaya lamaqoqo akhethekile eyunivesithi, agcina izinkulungwane zobuciko bokuqala bomlando wase-Afrika, okufaka phakathi izincwadi ezingandile, imibhalo yesandla, izithombe kanye nemibhalo.
Ubukhulu bomonakalo namanje abukaziwa.
“Ukuhlolwa okuphelele kungenziwa kuphela uma isakhiwo sesitholwe siphephile,” kubhala uSatgoor.
“Ngokuthokozisayo uhlelo lokuxwayisa ngomlilo lubangele ukuthi izivalo zomlilo zivimbele ukusabalala komlilo kwezinye izingxenye zomtapo wolwazi.”
IMeya uDan Plato uthe: “Kuyadabukisa ukuthi kulahleke amagugu omtapo wezincwadi e-UCT, kodwa ngazisiwe ukuthi eminye yemisebenzi ebaluleke kakhulu ilondoloziwe ngokusebenza ngokushesha kwama-shutter fire.”
Ezinye izakhiwo zasekolishi nazo zicekelwe phansi ngumlilo. Umlilo ubhidlize i-Mustert’s Mill efulelwe ngotshani, eyakhiwa ngowe-1796, okwakuyindayo endala kunazo zonke ezweni enomshini womoya.
Amalangabi aphoqelele ukuthi kukhishwe abafundi abayi-4 000 abebesendaweni yesigameko.
Iphini likashansela wakule nyuvesi, uSolwazi uMamokgethi Phakeng uthe ukudla nendawo yokuhlala sekuhlinzekelwe abafundi abakhishiwe.